Brezila: Fanalam-baraka nahazo ilay vehivavy Breziliana nampodiana avy any Espaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2011 9:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Português, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Namoha indray ny resaka mikasika ny fifindramonina eo amin'ny firenena roa tonta ny fampodiana ilay mpandeha fialan-tsasatra Breziliana Denise Severo 34 taona ary mpanao fikarohana eny amin'ny anjerimanontolo, tamin'ny voalohandohan'ity taona ity.
Nanoratra taratasy misokatra mikasika ny zavatra niainany izay tena nampizarazara ny mpitoraka bilaogy maro isan-karazany i Severo, ary nahitana fihetseham-po maro ny nanaovan'ny manam-pahefana Espanola misahana ny fifindramonina azy.
- "Ary inona no zavatra tadiavina raha hiditra ao amin-ny firenenao?" -"Andininy voalohany: Tsy mahazo raha Breziliana." Sary miaina nataon'i Amarildo, efa nahazoana alalana.
“Tena fatiantoka ranofotsiny”
Namerina naneho [pt] ny taratasy misokatr'i Severo i Rogério Tomaz Jr., avy ao amin'ny bilaogy Conexão Brasília-Maranhão , izay naseho tamin'ny 30 Janoary 2011, izay ahitana azy manazava ny zava-miseho:
Mino aho fa maro taminareo no nahalala fa handeha haka rivotra miaraka amin'ny namako Gracinha tany Espaina aho. Eny e, efa voaomanay daholo ny zavatra rehetra, nividy ny tapakila, ary namandrika ny tranom-bahiny sy ny zavatra rehetra. Na izany aza, tamin'ny fiaramanidina samihafa no nisy anay. Adin'ny 15 taorian'ny dia, avy dia NOFAOHIN’ ny manam-pahefana Espanola misahana ny fifindra-monina TAMIN'NY TSY RARINY ny tenako! Notanan'ny AM-PONJA tao amin'ny efitranon'ny polisy aho nandritra ny adin'ny 15 ary natao tahaka ireny olona nahavita heloka be vava ireny! Tsy nanana zo ny hiantso an-tariby olona aho, tsy misy fampahafantarana ny antony. Notazonin'izy ireo aho, ary adiny fito taty aoriana aho vao nahazo mpisolovava sy mpandika teny. Tena nosavaina manontolo ny tenako ary nalaina tamiko ny poketrako sy ny entako rehetra talohan'ny nahitako ny mpisolovava. Nanapa-kevitra fotsiny izao izy ireo fa tsy tokony hiditra ny firenena aho ary nataon'izy ireo ny fomba rehetra nampodiana ahy, nitsaratsara foana izy ireo .
Nilaza i Denise fa nandritra ny nitanana azy tsy nahazo zo hahazo mpisolovava, dia nifampizara efitra tamina mpigadra hafa izy, mainty hoditra daholo na Latino, izay nahitany mazava tsara ny tsy rariny sy ny fatahorana diso tafahoatra ny avy any ivelany:
Teo amin'ny olona 10 teo izahay no tratran'izao zavatra izao [notanan'ny manampahefana misahana ny fifindramonina] ary Latino daholo izy ireo na /Afrikana mainty hoditra! Midika izany fa TENA FATAHORANA DISO TAFAHOATRA NY AVY ANY IVELANY RANOFOTSINY IZANY ! Nefa FATAHORANA NY MAINTY SY NY LATINO!! TENA TSY RARINY!
Mitsikera ny fomba andraisan'ny Breziliana ny mpizahataniny ny mpitoraka bilaogy Tomaz Jr. oharina amin'ny tranga niainan'i Severo tany Espana :
Tao anatin'ny telo taona, handray vahiny Espaniola maro i Brezila miaraka amin'ny solon'anarana hoe “Fúria” [“Fury” – solon'anaran'ny ekipan'ny baolina kitra Espaniola] ao amin'ny  fiadiana ny tompon-dakan'izao tontolo izao. Tahaka ny ataontsika ny olona rehetra izay mitsidika antsika, dia ho raisintsika tsara ihany koa izy ireo, amim-pandraisana sy hafanam-po. Fa tsara kosa ny mampahafantatra an'izao tontolo izao hoe ahoana ny fomba fandraisan'i Espaina ny mpitsidika azy avy amin'ny firenen-kafa ka hijery ny tanin'i Miguel de Cervantes.
Tranga tokana ve iny ?
- "Ankehitriny, ho an-ny Espaniola mankany Brezila, eo anivon-ireo antontan-taratasy rehetra, tsy angatahintsika raha hainy ny mandihy ." Sary nataon'i Lute, efa nahazoana alalana.
Nilaza mikasika ny tranga ny masoivoho Espaniola any Brezila milaza fa [pt], “ny tranga tokana tsy afaka hanasokajiana an'i Espana ho mpanavakavaka mihitsy na koa hoe enjehinay ny Breziliana miditra ny seranam-piaramanidina any aminay.”
Nanampy izy nanome rariny ny fampodiana an'i Denise Severo:
Voalohany, I Rtoa Severo, na dia tsara aza ny tao an-tsainy, dia tsy ampy fandinihana antontan-taratasy na porofo ilaina [hidirana ny firenena].
Faharoa, ny mekanisma marin'ity tranga ity , dia tsy ilaina mihitsy ohatra ny firotsahan'ny Masoivohon'i Brezila.
Na dia nanana porofo aza i Severo – noho ny namany – noho ny famandrihana nataony tany amin'ny trano fandraisam-bahiny ary koa ny polisy Espanola nomena azy sy ny mpisolo vava notendrena ho azy niantso nanamafy ny famandrihana, ary koa ny entany nahitana karatra TravelMoney avy amin'ny Banco do Brasil [Bankin'ny i Brezila ], nilaza [pt] ny masoivoho Zaldivar fa tsy nanana ny taratasy ara-dalana tokony nidirana teo amin'ny firenena i Denise.
Simone Severo, Denise's sister, also published [pt] an open letter attacking the Spanish government, here reproduced by Blog do Nassif:
Tokony hangataka an'i Espana hifona amin'i Denise Severo i Brezila ary koa amin'ireo mponina hafa rehetra izay noampangaina lainga mahatsiravina be izao ary koa nohosihosena ny zo mahaolona azy. Ilaina ny miaro ny hevitra, ny manontany, ary maninona koa moa aza, raha MITAKY ny governemanta [Breziliana] hiaro antsika. Fanampin'izany, tsy izany ve no nofidintsika? Mba hananan'ny rehetra zo mitovy ary koa ny firenentsika hiaro antsika sy hikarakara antsika?
Niady hoan'ny demokrasia i Brezila nandritra ny 50 taona, ho an'ny toerany eto amin'izao tontolo izao ary koa ny hanana feo; ka mba tsy hangina anie izany feo izany, ka tsy hisy na iza na iza hanondrika ny lohany, satria tsy misy olona manana zo hilalao sy hangalatra ny fiainan'ny hafa, na indrindra koa hanondro hoe iza no tena nahavita ny heloka be vava.
Ry Espana: mifonà!
Brezila: asehoy ny endrikao!
Namaly Ambasady Zaldivar[pt] i Denise Severo ao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny bilaogy Vi o Mundo (Jereo ny tontolo) [pt], mitsikera ny zavatra natao azy, ny fanalam-baraka amin'ny nanarahana azy toy ny mpamono olona ao anatina fiara mifono vy hifindra fiaramanidina, ary notanana am-ponja nandritra ny 15 ora – ny adin'ny 7 amin'io tsy nahazo nifandray tamin'ny olona avy any ivelany. Farany izy nanontany raha manaja ny zon'olombelona i Espana:
Mazava be, tompon-teny farany amin'ny olona izay tiany hiditra na tsy hiditra amin'ny taniny ny firenena rehetra, fa ny tokony hiantohana kosa ny fanajana ny zon'olombelona.
Andriamatoa Ambasadaoro, manontany tena aho raha azo itarafana ny fiantohan'ny zon'olombelona any Espana ireo fihetsika ireo? Manontany tena aho raha manaiky sy hiantsoroka ireo fihetsika ataon'ny polisy ireo i Espana?
Farany, fanontaniana tena manan-danla: tena fifandrifian-javatra fotsiny tokoa ve hoe olona Amerikana Latina na/sy Mainty hoditra ihany no notanana?
Niresaka momba ny olana samihafa nolazain'ny Masoivoho izy, naneho – isan-tendrony – ny fiarovan-kevitra fa tokony omena tsiny izy amin'ny fikarakarana natao azy .
Tsy mahazatra [pt] ny fomba fanao amin'ny nitondrana ny Breziliana avy any Espana. Tamin'ny 2009, iray amin'ny vahiny dimy avy amin'ny firenena dia Breziliana avokoa (21% amin'ny tontalibeny), ary tamin'ny taona 2008 dia 23% ny taha. Tamin'ny Febroary 2008, nanao politika amin'ny fitoviana eo amina isa na Beziliana nampodiana tsy misy taratasy fanamarinana nataon'ny governemanta Espanola i Brezila .
Tamin'ny fotoan'andro, nanao fanambarana [pt]ny filoha Breziliana teo aloha Luís Inácio Lula da Silva:
Nifarana tamin'ny Alahady ny fifidianana ary ny marainan'ny herinandro manaraka aho mba nanantena ny hahazo fanazavana mikasika ny zavatra nitranga. Mety hoe zavatra fanaon'ny antoko mpitantana [Espanola] izany, fa, raha azony natao dia tsy nampidirina tany Espana ny mahantra avy amin'ny firenena hafa.
Nanambara [pt] i Marcos dos Santos, Breziliana nampodiana tamin'ny 2008 hoe:
Tena natao sahala amin'ny biby mihitsy izahay, nefa izahay tsy nahalala akory hoe inona no nataonay
Tsy mazava foana hoe hiverina amin'ny fanao amin'ny fandroahana ny ankamaroan'ny Breziliana ve i Espana sa ahoana, na hamaly ve i Brezila, sahala amin'ny zava-nitranga tamin'ny farany.
adin'ny fito taty aoriana fotsiny